Na-eweta Europe na Myanmar: Cinema kacha mma na Yangon
Home » Na-agbasa News Travel » Na-eweta Europe na Myanmar: Cinema kacha mma na Yangon
• Free n'ọnụ ụzọ 17 award-emeri fim si gafee Europe na 21 - 30 September
• Ememme ihe nkiri si mba ọzọ ogologo oge na Myanmar - mbipụta 27 nke European Film Festival na Yọngọn
• Ebe 2: Nay Pyi Taw Cinema (242 - 248 Sule Pagoda Road) na Goethe Villa (Kabar Aye Pagoda Road, okporo ụzọ Nat Mauk Road)
Yangon, 17 Septemba 2018 - Nweta 17 ihe nkiri nke oge a si gafee Europe na 27th European Film Festival na Yangon. Haziri site na ndị nnọchi anya European Union na Myanmar na Goethe Institute Myanmar, yana onyinye sitere na mba iri na asaa nke Europe, ememme European Film Festival Yangon 17 na-eme site na 2018-21 Septemba. A na-emeghe onyonyo maka ọha na eze n'efu na Goethe Villa na Nay Pyi Taw Cinema.
Ememme Nkiri European kwa afọ bụ ememme ndị mba ọzọ kachasị dị ogologo na Myanmar. Ọ na-ezube ịkwalite mgbanwe ọdịbendị n'etiti Myanmar na Europe ma na-egosipụta ọtụtụ ihe nkiri Europe.
N'ikwu okwu na mkparịta ụka mgbasa ozi na Yangon, HE Kristian Schmidt, onye nnọchi anya European Union na Myanmar, kwuru, sị: “Ihe nkiri ndị Europe nwere nke ha, pụrụ iche. Ha na-abụkarị ihe ọchị, atụghị anya na ndị dike. Ma nke a bụ ihe na-eme ka akụkọ ha na-atọ ụtọ ma daba onye ọ bụla uru. ”
"Anyị nwere olile anya na Ememme Nkiri nke Europe ga-egosi ndị ọbịa anyị n'okpuru obere ọdịbendị ọdịbendị anyị, anyị niile nwere mmadụ nwere mmekọrịta," ka ọ gbakwụnyere.
N’ikwughachi okwu onye nnọchi anya gọọmentị ahụ, onye meriri akara ugo mmụta nke Myanmar Academy, bụ Auntie Grace (Swe Zin Htike) kwuru, sị, “Cinema bụ windo magburu onwe ya nye ụwa. Ihe nkiri na-ebuga anyị ebe ọhụrụ na ọdịbendị dị iche. Art bu ikpo okwu maka ijiko, ihe omumu na maka udo. Ndị omenkà dị ka anyị nwere mmetụta zuru ụwa ọnụ. Anyị nwere ike inye aka wulite mmekọrịta dị n'etiti ndị mmadụ n'akụkụ ọ bụla nke ụwa.
Ihe nkiri French “Django” meghere ememme afọ a na 21 Septemba na Nay Pyi Taw Cinema na obodo Yangon. Onye isi mmalite nke onye na-eme ihe nkiri na-emeri Étienne Comar, Django dabeere na ndụ pụrụ iche nke akụkọ akụkọ jazz Django Reinhardt.
“Django bụ akụkọ ihe mere eme nke ga-eji obi ụtọ bufe ndị na-ekiri ha na France n'oge 1940. A na-ahụta dịka otu n'ime ndị na-akpọ ụbọ akwara kachasị oge niile, Django Reinhardt wetara ọ joyụ ma were egwu Gypsy-Jazz kpọta ndị mmadụ n'ụkwụ n'oge oge siri ike. Anyị na-atụ anya na ndị na-ekiri ihe nkiri na Myanmar ga-ahụ ihe nkiri a n'anya na ụda olu ya dị egwu, "ka Mr Franz Xaver Augustin, Director nke Goethe Institute Myanmar kwuru.
Tiketi maka ihe nkiri bụ n'efu ma dị na nke mbụ na-abịa, izizi jere ozi na
IG Asia Partners Singapore Airlines KrisFlyer ịbụ onye mbụ na-ere ahịa na-enye kilomita
Nke 5 nke Sichuan International Expo Expo na-emeghe na Leshan, China
Standardkpụrụ ahụ na-ekpughe ihe ndị na-abịanụ na Arabia Travel Market 2021
Associationtù ndị Indian nke ndị na-eme njem nlegharị anya ugbu a fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe niile na mba ahụ
Ọnụ ego dị elu nke nyocha PCR na-emetụta mgbake njem mba ụwa
Buriram nke Thailand mere ka ịjụ ọgwụ mgbochi COVID-19 bụrụ mpụ